Tsy Mbola Mahafantatra Kiobà Tsy Natao Fahirano Aho · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2014 17:35 GMT
Amin'ny dingana rehetra nataon'i Barack Obama, ho ahy tsy misy zavatra manandanaja kokoa noho ny fahirano / ankivy ataon'i Etazonia amin'i Kiobà sy ny fampidirana indray ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny firenena Amerikana roa.
Nanjary nazava tamiko tsara roa taona lasa izay nandritra ny fitsidihana tany London tany London, rehefa tsy navela haka vola tao amin'ny biraon'ny Western Union aho, satria “tsy hita amin'ny lisitra ny firenena iavianao (voamarina tamin'ny fampisehoana ny pasipaoro). “Toy izany koa no nitranga tamin'ny tany San zavatra José, Costa Rica.
Ka, tamin'ny 17 Desambra lasa teo, tsapako fa tsy niresaka momba ny fifanakalozana gadra ihany i Obama, fa momba ny fampiharana raisina amin'ny hoavy amin'ireo fepetra manan-danja maro ihany koa, ny sasany izay miresaka ny fahirano (na ankivy) sy ny fandravonana ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta. Niteny tamiko aho hoe: tsongoy aho, manonofy aho. Toa tsy mampino, tsy mampino tahaka ny mandeha any Kiobà amin'ny 30 Desambra. Lefy any ambadika vetivety ny tantaran ‘ny Kiobana mpitsikilo roa sy ilay AAmerikana mpiasa mpiantoka .
Mendrika homarihana fa daty manan-tantara ao Kiobà ny 17 Desambra izay hahatsiarovana ilay tafavoaka avy ao amin'ny fahagagàna San Lazaro, izay, araka ny fomba nentim-paharazana Santería kiobàna, dia i Babalú Ayé, fanahy mampifangaro zavatra sy masina izay mijery ireo ampijalian'ny aretina sy ny tsy-fisiana—fomba iray ilazana ny fifandraisana nisy hatramin'izao teo amin'i Kiobà sy i Etazonia.
Natao hanamafisana ny famotsorana sy fifanakalozana gadra fotsiny ihany ny fivoahan'i Raúl Castro ho hitam-bahoaka, zavamisy izay efa fantatro mialoha. Saingy rehefa naheno an'i Obama nandraraka ny “TODOS SOMOS AMERICANOS” aho dia nitsangana ny voloko tao amin'ny hatoko. Tsy naminavina io lehilahy io hiditra ao amin'ny fanovana lalina sy manan-tantara tahaka izany aho.
Aty aminay aty Hanover, Alemaina, niaina ny karazam-pihetseham-po maro izaho sy ny sakaizako Esmeralda: faminavinana ny hoavy, fanantenana, fifaliana, fisalasalana, ranomaso, horakora-pifaliana. Tsy maintsy niaritra ny tehatehaka, ny tabataba ary ny horakora-pifaliana ireo mpifanolo-bodirindrina aminay mampalahelo. Ho an'i Esmeralda, izay, raha teraka Kiobàna, dia nihalehibe tany Alemaina Andrefana nandritra ny vanim-potoanan'ny Ady Mangatsiaka, izao toe-javatra vaovao izao dia midika ho, araka ny eritreritro, fanomezana azy ara-drariny ny fanondroana maha-Kiobàna an-tsesintany azy—zavatra izay noesorina taminy fahazaza ary nametraka azy ho “Komonista,” na dia efa nandao an'i Kiobà talohan'ny 1959 aza izy.
Raha nihaino ny filoha roa tonta aho (Raúl voalohany ary Obama avy eo), dia taitra tamin'ny fifandakan'ny hevitra sy ny takiana aho: fahazoana miditra amin'ny aterineto manerantany ao Kiobà, fanamoràna ny fahazoana pasipaoro sy fangatahana handeha lavitra, tsy heverin'ny kaonsilà Amerikana ho “mety ho mpifindra monina” intsony (voambolan'ny hazalambo ao amin'ny nosy), fifanajan-dresaka eo amin'ny mpisintaka sy ny revolisionera, ary ny zavatra maro hafa.